AMBOARY TSY AFAKA MAMETRAKA NY FANAVAOZANA NY MPAMILY AMIN'NY ALÀLAN'NY TRAIKEFA GEFORCE - MALEMY
Amboary tsy afaka mametraka ny fanavaozana ny mpamily amin'ny alàlan'ny traikefa GeForce: Tsy afaka nanavao ny mpamily momba ny karatra sary NVIDIA tamin'ny alàlan'ny GeForce Experience aho, izany no antony tsy maintsy nahitako fomba iray hafa izay misintona tanana ireo mpamily ary manavao azy ireo. Ny olana dia mitoetra amin'ny console GeForce Experience izay tsy fantatro hoe inona izany, fa tsy mandany fotoana bebe kokoa dia ndao jerena ny fomba fanavaozana ny mpamily Nvidia.
Manavao ny mpamily amin'ny alàlan'ny Device Manager
1. Voalohany indrindra, tokony ho fantatrao izay fitaovana enti-tsary anananao, izany hoe izay karatra sary Nvidia anananao, aza manahy raha tsy fantatrao izany satria mety ho mora hita izy io.
2. Kitiho ny Windows Key + R ary ao amin'ny boaty fifanakalozan-kevitra karazana dxdiag ary kitiho ny fidirana.
windows 10, kinova 1803 - lesoka 0x80070002
3.Aorian'izany fikarohana ny takelaka fampisehoana izany (hisy tabilao fampisehoana roa ny iray ho an'ny karatra sary natsangana ary iray hafa ho an'i Nvidia) tsindrio ny takelaka fampisehoana ary fantaro ny karatra misy anao.
4. Ankehitriny mandehana mankany amin'ny mpamily Nvidia tranokala misintona ary ampidiro ny antsipirian'ny vokatra izay vao hitantsika.
5. Karohy ny mpamilinao aorian'ny fampidirana ny fampahalalana, kitiho ny fanekena ary sintomy ireo mpamily.
6.Aorian'ny fahombiazana amin'ny fisintomana, apetraho ny mpamily ary nohavaozinao tamin'ny tanana tanana ireo mpamily Nvidia anao. Ity fametrahana ity dia mila fotoana maharitra fa havaozinao tsara ny mpamilinao aorian'izany.
Raha tsy mety aminao ilay fomba etsy ambony dia andramo ity fomba fanoloana ity:
1. Tsindrio havanana Ity solosaina ity na Ny solosainako ary safidio Properties .
2. Ao anatiny Properties tsindrio eo Mpitantana Fitaovana .
hadisoana kritika tsy mandeha ny menio
3. tsindrio havanana ary ampiasao ny lozisialy Update Driver amin'ny miseho na Adapter momba ny sary VGA mahazatra avy amin'ny lisitry ny fitaovanao.
4.Point amin'ny lalan'ny lahatahiry mpamily NVIDIA nalaina (ohatra. C: NVIDIA DisplayDriver xxx.xx windows_version English Display.Driver ). Raha tsy misy ity fampirimana ity dia tsy mbola nampandeha ny installer ianao taloha.
5.Miorena indray ny PC sy ireo mpamily tsy maintsy havaozina.
Izany no nahombiazanao tamim-pahombiazana Tsy afaka nametraka fanavaozana ny mpamily amin'ny alàlan'ny laharana GeForce Experience fa raha mbola manana fanontaniana ianao dia aza misalasala manontany azy ireo ao amin'ny faritra maneho hevitra.
miaro ny fitondran-tena foana
ny fomba fanaovana sary amin'ny teny
tsy nahavita ny fanavaozana ny windows 10
windows 10 chrome tsy mandeha
Windows dia tsy afaka manamarina ny sonia niomerika ho an'ireo mpamily takiana amin'ity kaody 52 ity
Windows 10 google chrome olana
hamafa ny fisie vonjimaika windows 10 tsy mandeha